Impilo yabesifazane Imithi
I-poisonous botulinum yinto ekhishwa ngesikhathi sokuphila kwe-clostridium ye-botulism, ingenye yezinyosi ezinamandla kunazo zonke ezenza ukuba abantu abaningi bafe. Akukade kudala, akekho ongacabanga ukuthi ubuthi obunobungozi obuyozuzisa abantu. Lezi zinambuzane eziningi ze-botulinum zisesigaba sezinzwa ze-neurotoxin, ngenxa yalokho ama-neurocytes alahlekelwa amandla okudlulisa injabulo yokwesaba emisipha.
Ngaphandle kwale khono, imisipha ayinamandla.
Ukwehla kwesibindi kwenzeka lapho izimo zesisindo ezivela ezifundeni zobuchopho zifaka imisipha ehambelanayo. Kulesi simiso, umsebenzi wezinsimbi zamathambo kanye nemisipha yokuphefumula isekelwe. Ngakho-ke, izimpande ezisemisipha enomthwalo wokunyakaza okuphefumulayo zibaluleke kakhulu. Yingakho lapho i-botulism isengozini enkulu yokufa, ngaphandle kosizo lwezokwelapha olufika ngesikhathi.
Izakhiwo ezinjalo ze-botulinum toxin sezilokhu zithakazelisa odokotela, ngoba ngosizo lwazo ungakwazi ukulawula noma yisiphi isifo esihlobene nomsebenzi okweqile kwezinye izingxenye zesimiso semisipha. Ngasekupheleni kweminyaka yama-1980, i-toxin ehlanjululwe futhi engasetshenziswanga yayisetshenziselwa ukuhlinzeka ngezifo zokwelapha futhi isetshenziselwa ukuphatha imisipha yejwabu leso, i-strabismus, izindawo ezithile zobuso kanye nezinye izinkinga zesistimu ye-neuromuscular. Eminyakeni embalwa kamuva, i-botulinum isxin yayisetshenziswa emithini ye-cosmetology.
E-cosmetology yanamuhla ihlose ukunciphisa umsebenzi wokulinganisa, i-dysport isetshenziswa.
Indlela yokwenza izidakamizwa i-dysport. I-Dysport ayisebenzi ezindaweni ezizungezile, ukujova kwayo kunomthelela wendawo. Ngenxa yalokhu, izidakamizwa zingafakwa ngokuqondile "kulitshe". Ngenxa yalokho, imisipha yobuso ikhululekile futhi ingakuvumeli ukuba uphefumle amehlo akho, ubambe ikhanda lakho, uhambise amashiya akho, njll.
Lokhu kwenza kube lula ukugwema ukubukeka kwemibimbi emisha nokujula kwabaneminyaka, nakuba kungenzeka, futhi kunciphise umzwelo lapho usebenzelana nabantu.
Ngokuvamile, i-dysport yezidakamizwa isetshenziselwa imisipha yangaphakathi. Lokhu kwenza kube lula ukuqeda imibimbi ekhaleni, ebunzini, kusukela "ezinyaweni" ezinhlangothini zamehlo. Kulezi zindawo ebusweni ukuthi isikhumba sinomthelela kakhulu, ngakho benza i-anesthesia ngaphambi kokuqhubeka nenqubo. Izifo zenziwa nge-sindle ekhethekile. Ngemuva kwenqubo, i-ice isetshenziswa imizuzu eminingana. Isikhathi sokuqala, emva kokujola, awukwazi ukwenza ubuhlungu besibuso futhi usebenzise nokucindezela ezindaweni lapho umuthi ujojelwe khona, ngoba ngemuva kwalokho ungenza ngokuqondile eminye imisipha. Uma lokhu kwenzeka, lo muntu angathola ukubonakala okungokwemvelo nokungafani. Nakuba lezi ziphutha zingalungiswa kalula nge-antidote ekhethekile, kodwa akusizi ngalutho ukuletha ukuhlupheka okungaphezulu nokudaka impahla. Ngemuva kwamasonto owodwa nesigamu emva kwenqubo, kufanele ugweme i-sauna, okugeza okushisayo, ungathathi utshwala futhi ungabi nokuzivocavoca ngokweqile.
Umphumela wokuvuselela wenqubo ubonakala emva kwezinsuku ezingu-3-4 futhi ukwanda kancane kancane kwamasonto amabili. Umphumela wokuthunyelwa kwamanye amazwe uhlala cishe izinyanga ezingu-8-10. Ngemuva kwalesi sikhathi, umsebenzi owenziwe ngezivumelwano wemisipha ubuyiselwa, njengoba kuhlanganiswa ukuxhuma kwe-neuromuscular. Emva kwalokhu, kubalulekile ukuphinda inqubo uma ufuna ukunweba umphumela.
Ukungahambisani nemikhiqizo ye-dysport:
- ubuthakathaka bemisipha;
- ukukhathazeka kwe-coagulation;
- ukusetshenziswa kwama-antibiotics;
- Hypersensitivity kwisidakamizwa.
Izakhiwo eziwusizo nokusetshenziswa kwe-belladonna emithi
Amavithamini ekuphileni komuntu
I-Reduxin: amaphilisi okudla
Amaphilisi e-Kinephron: ukusetshenziswa nokuphikisana
Ingabe kufanelekile ukwenza ukuhlinzwa kwepulasitiki?
Ungakhetha kanjani amakhethini afanele?
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngaphandle kokushiya i-TV: amathiphu avela kumlingisi u-Anna Khilkevich
Ama-fritter ane isipinashi ne-gorgonzola
I-ramoscope ram for the new year
I-Aria ye-guest yaseFenike, izinsuku zokudla
Isaladi yama-pearl we-mutton, utamatisi nama-izaqathe
Ugogo u-Anna Sedokova ugxeke ama-diamonds asebiwe
Izinzuzo kanye nokudla kokudla okuphansi kwekhalori
Kulungile kanjani ukuphuza i-Ivan-itiye?
Iklabishi yaseShayina neju